Puntland oo mamnuucday in hub lala galo garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso – STAR FM SOMALIA
C/qaadir Faarax Shire, taliyaha ciidamada booliska ee Puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Boosaaso ayaa sheegay inay mamnuuc tahay hub in lala galaa garoonka diyaaradaha ilaa dad cayiman mooyee.
Madaxweynaha Puntland, ku xigeenkiisa, gudoomiyaha baarlamaanka iyo saraakiil gaar ah ayuu sheegay inay ciidamadooda la gali karaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso.
“Ma ogolaan doono in hub lala galaa garoonka diyaaradaha, caalamiyanna waa mamnuuc, madaxweynaha, ku xigeenkiisa iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo kaliya ayaa loo ogol yahay iney ciidamadooda la galaan garoonka, laakiin cid kale waa ka mamnuuc”ayuu yiri taliyaha ciidamada booliska.
Arintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhawaan saraakiil ciidan isku qabsadeen iney hubka la galaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso.
Madaxweynaha Soomaaiya oo safar ugu anbabaxaayo makaalada kismaayo.